Waa Maxay Ganacsi? |
Miski Cabdinuur Salal, June 2, 2019
Dheefta Waxbarashada Ay Leedahay!
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, January 17, 2019
Wareerayee Ma War Baad Iga Hayseen?
Dad Diyaysan Iyo Dal Loo Tashaday?
Cabdikhaadir Ibraahim Axmed, January 22, 2019
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 7, 2016
Ganacsigu waa nidaam dhaqaalle oo meesha allaabta iyo adeegyadda wax lagu badelo mid kale ama lacag. Ganacsi kasta wuxuu u baahanyahay nooc ka mid ah maalgelinta iyo macaamiil ku filan in loo iibin karo si joogta ah si uu ugu caddeeyo faa’iidada. Ganacsiga wuxuu u kalla baxaa noocyo badan oo kala duwan sidda midka qaas ah (private) ama mid ay leedahay dawladda sidda kuwa aanay ka raadinin bulshada faa’iido (non-profit business). Ganacsiga noocaan oo kalle waxaa jiro qaar aysan dawladda ka raadinin lacago badan sidda korantada iyo biyaha oo kale. Waxaana ugu badan hay,adaha caafimaad oo ah gargaar u qaas ah bulshada. Waxaa jiro hay,ado kale oo u qaabilsan horumarinta dhaqaalaha dalka. Wadamada qaar dunidda waxaad ku arkaysaa bangiyada dhexe in ay leeyihiin mashruucyada dhiiri gelinta ganacsiga yar-yar (micro-finance) oo hadafkiisa yahay in bulshada laga dhiso kaabayaasha dhaqaale.
Ganacsiga, siddoo kalle waxaa loo yaqannaa shirkado ama shirkad, waa urur ku hawlan bixinta badeecadda, adeegyadda, ama labadaba, si ay macaamiisha u helaan adeeg. Ganacsiga waa dhaqaale rasamaal ahaan loo leeyahay oo hadafkiisuna yahay in faa’iido lagu raadiyo rasamaalkaas.
Ganacsiga qaaska ah iyo kuwa kalle ee dowladda waxaa ka mid ah:
Kuwa dhaqaalaha iyo maaliyada waxaa kamid ah:
Amal Express, Adeegyada maaliyadeed
Bank of Somaliland, Bangiga dhexe
Central Bank of Somalia, Bangiga dhexe
Dahabshiil, adeegyada maaliyadeed
First Somali Bank, Bangi ganacsi ah
International Bank of Somalia, Bangi ganacsi
Islamic Insurance Company, caymiska
Salaam Bank, Bangi ganacsi
Salaam Somali Bank, Bangi ganacsi
Somali Chamber of Commerce and Industry, urur ganacsi
Shidaalka iyo saliidda:
Midowga Sahaminta shidaalka Soomaaliyeed, saliidda iyo gaaska
Air Somalia, Diyaarad
Daallo Airlines, Diyaarad
Hargeisa Taxi, Shirkad takaasi
Jubba Airways, Diyaarad
Raho City Taxi, Shirkad takaasi
Somali Airlines, Diyaarad
Kuwa isgaarsiinta waxaa ka mid ah:
Golis Telecom Somalia, Isgaarsiinta
Hormuud Telecom, Isgaarsiinta
NationLink Telecom, Isgaarsiinta
Somali Telecom Group, Isgaarsiinta
Marka laga hadlaayo xagga suuqa, ganacsi walbo wuxuu leeyahay qaab loo sharaxaayo ama ay u qeexaan milkiilayaasha ganacsigaas. Ganacsi walbo waxaa wanaagsan inuu leeyahay qaab loo sharaxi karo markii ay timaado xagga suuqa. Haddii ganacsiga laga bixini karo sharaxaad waxay kuu suurta gelin kartaa inaad fahanto waxaad uga baahantahay inaad sameyso sida suuq geynta markaad sameynayso.
Ganacsi hal qof uu leeyahay (Sole proprietorship): Ganacsiga noocaan oo kale ah waxaa iska leh hal qof oo kali ah. Qofka noocaan oo kale ayaa wax walbo oo ganacsigaas rasaamaal u ah iska leh. Sida makiinadaha, kombuyuutaradda IWM. Milkiilaha ganacsiga noocaan oo kale ayaa lagu lahadaa deymo badan, laakiin markaad dhinacyo badan ka fiiriso marna waa Qatar weyn marna waxaa laga helaa faa’iido badan.
Iskaashiga (partnership) waa ganacsi ay leeyihiin laba qof ama ka badan. Iskaashiga micnihiisa waa in waxwalbo la wadaago sida deymaha, rasamaalka ay leedahay shirkadda, macaamiilka, dejinta go’aamada, iyo guud ahaan in la wadaago faa’iido iyo qasaaro. Waxaa jiro saddex nooc oo iskaashi. Saddexda nooc ee ugu badan iskaashiga waxay kalla yihiin iskaashi faa’iido-doon, iskaashi guud iyo iskaashiga xadidan.
Ganacsi ka kooban dad badan (Corporation) ganacsiga noocaan oo kalle waxaa lagu leeyahay daymo aan sidaas usii badneen. Waxwalbo oo ku jira ganacsigaas waxaa iskaleh dadka wax ku leh oo kali ah. Qof walbo oo ganacsigaas wax ku leh waxaa loogu dhuftaa boqolkiiba. Waxaa laga yabaa inuu ka koobanyahay 500 ama in ka badan milkiilayaal, milkiile walbo waxaa loogu dhuftaa boqolkiiba inta uu ku leeyahay. Waxaana jira nidaam ka wada dhaxeeyo dhammaan milkiilayaashaas noocaan oo kale.
“Dhammaan ganacsiga nooc walbo uu yahay wuxu u baahanyahay dulqaad, qaasatan waqtiyada ugu horeyso oo uu ku cusubyahay suuqa. Ganacsiga wuxuu kale uu u baahanyahay hawlgal wanaagsan. Hawlgalka ayaa loo baahanyahay inuu noqdo mid wax ku ool ah. Hawlgalkaan waxaa loo yaqanaa maamulka. Laamaha ugu waaweyn ee maamulka waa maareynta maaliyadda, maamulka suuq-geynta, maareynta shaqaalaha, maamulka istiraatiiji ah, maamulka wax soo saarka, maaraynta hawlaha, maamulka adeegga iyo macluumaadka, maamulka teknoolijiyada.
Marwalbo oo ganacsiga ku dhisanyahay xikmad iyo waayo aragnimo dheeri ah waxaa laga dareemaa saan-saanta kobaca dhaqaalaha ee ganacsigaas. Marwalbo la imaaw fikir aad kaga duwantahay ganacsadayaasha kale ee aad tartanka kulla jirto suuqa. Marwalbo waxaa wanaagsan in faraskaada fardaha wax kaga duwanyahay. Iskuday oo isku taxluuji inaad ku guulaysato siyaasadda aad ka damacsantahay inaad guullo kaga gaarto ganacsigaada.
“Ma ogtahay in libaax badeedka hal il uu ku hurdo?” marwalbo oo aad feejignaan joogto ah la timaado waxaa macquul ah inaad hanato ama aad dhammaystirto baahida ugu weyn ee suuqa taalo.
Ganacsiyada inta badan waxay leeyihiin “hantida aqooneed” oo u baahan in laga illaaliyo tartamayaasha shirkadda inuu sii joogo uu faa’iido. Tani waxay u baahan tahay shatiyada, xuquuqda, allaabooyinka ama illaalinta qarsoon ee ganacsiga. Ganacsiyada intooda badan waxay leeyihiin magacyo, shicaaro, farsamooyinka kalle, Shatiyada iyo xuquuqda daabacaada. Dastuurka Soomaaliya waxaan ka rajeynaynaa inay soo saari doonaan sharciyo iyo qaanuuno ka hadlaayo arrimaha ku salaysan sharciyada ganacsiga ee federalka, halka sirta ganacsiga iyo trademarking inta badan laga doonaayo inay noqoto arin gobol.
Nidaamka ganacsiga dalka oo dhan in la dhiso oo la hergeliyo ku dhaqankiisa waxay suurta gelini kartaa ama ay u tahay horumarka dhaqaalaha bulshada qeybaheeda kalla duwan. Nidaamyada noocaan oo kale waxaa laga dhexlaa horumar iyo isbedel ku salaysan dhaqaalaha dalka oo idil.
Next post Maxaad ku qiimeysaa horumarka? ||Tukesomalism.com
Previous post Siddee Ummadda Soomaaliyeed Dhexdooda Xal Loogu Heli Karaa?||Tukesomalism.com